Ubani Ongiphindayo? | Martech Zone
NgoLwesine, Septhemba 9, 2010 NgeSonto, ngoJulayi 5, i-2015 Douglas Karr
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule abantu bangibuze, ngingaqala kanjani ukuthola ukuthi ngubani ongiphinde wangiphinda? Lapho abantu besebenzisa isici se-retweet ngaphakathi kwe-Twitter, kulula kakhulu. Ngena ngemvume ku-Twitter ungachofoza Ama-retweets ekuzuleni kohlangothi lwesokudla. Ikholomu yesithathu ngu- AmaTweets akho, Retweeted futhi ikunikeza uhlu lwawo wonke amaTweets akho abuye abhalwe kabusha nokuthi ngubani owenzile.
Kukhona futhi i- API shayela ukufaka idatha ye-retweet ye-tweet enikeziwe. Ukuphinda u-retweeting umsebenzi ofanele ukulandelwa… uma othile ephromotha okuqukethwe kwakho, uthola ummeli wakho noma wegama lakho. Lowo umuntu ongeke ufise ukumlandela kuphela, kepha umuntu ongafuna ukuphishekela ukuzibandakanya okujulile naye!
Umsizi: I-Twitter iyindlela enhle yokuheha inani elikhulu lama-eyeballs kumlayezo wakho wokumaketha - kepha abantu abaningi abazi ukuthi benzani futhi bagcina bengatholi mpendulo. Kuphakathi kokuthi abanabalandeli abenele, noma bathumela imilayezo engafanele ngezikhathi ezingafanele noma benze iphutha elilodwa noma amaningi okubulala. Chofoza lapha ukufunda ukuthi ungakhulisa kanjani kalula nangokuziphatha i-Twitter yakho elandelayo.
Tags: buyisela emuvaobhale kabushaongibhale kabusha
Imidiya Yezokuxhumana + Izibalo = Akunembile
Drip Marketing Part Part 2: Ungamunci.
Icebo elincane lamaNifty. Siyabonga ngokuthumela uDoug!
Kuhle ngaso sonke isikhathi ukubona okuthunyelwe okudala kuxhunywe ngeqoqo lamaTweets! Ngubani ophinde waliphinda? 😉
Mar 16, 2011 ku-1: 28 PM
Sawubona mlingani wami, lapho ngichofoza ku-tweet yami engxenyeni ebuye yabhalwa abanye, ayinalo uhlu lokuthi ngubani ophinde waliphinda iTwitter njengoba livame ukwenza. Noma yimuphi umbono kungani? noma ngingabona kanjani ukuthi kwakungubani?
May 25, 2011 ku-4: 06 AM
Bengifunda ukuthi kungenzeka ukuthi ibhalwe kabusha ngabantu ongabalandeli nangabantu abavikela ama-tweets abo
Jul 9, 2011 ku-1: 16 AM
lolu hlelo lusebenza kanjani
Jul 9, 2011 ku-2: 20 AM
Akuyona uhlelo lokusebenza, Karberney, empeleni kuyisici ngaphakathi kwedeshibhodi ye-Twitter.
Mar 6, 2012 ku-4: 46 PM
wow yini isiphukuphuku esilahlekile.
wehlise isisindo, uthathe ishawa, usike intshebe yakho embi, futhi okubaluleke kakhulu, yeka ukusho lokho okushaya amanzi ngobuwula nokubi kakhulu, ukukuthumela ku-inthanethi. Isiphukuphuku se-Fucking
Mar 7, 2012 ku-12: 32 PM
Ungasebenzisa futhi http://www.tweetreach.com, http://www.sharedcount.com, http://www.whotweetedme.com, futhi omunye wemithombo engeke yenzeke yokuthola ukuthi ngubani ophinde wakubhala kabusha uzoba ngumeluleki we-Empire Avenue 'uKesley'.